एक पटक नुहाउँदा ६ बोत्तल स्याम्पु ! संसारकै लामो कपाल भएकी महिला - Dainik Headlines
Home / Featured / एक पटक नुहाउँदा ६ बोत्तल स्याम्पु ! संसारकै लामो कपाल भएकी महिला
Dainik Headlines January 14, 2019	Featured
बाटोघाटोमा युवतीले कपाल चिटिक्क पारेर हिंडेको देख्दा जो कसैको पनि मन लोभिन्छ । कपाललाई बिभिन्न डिजाइनमा सजाएर युवतीअरु आकर्षित देखिने गर्छन । तर, फ्लोरिडाकी आसा मन्डेलालाई आफ्नो कपाल लामो भएका कारण हैरानी भएको छ। उनको कपालको लम्बाइ ५५ फिट छ भने तौल २० किलो छ ।
बाटोघाटोमा हिड्डुल गर्दा उनको कपाल सम्हालिदिने साथी नभई हुँदैन । किनकि, बाटोमा हिँड्दा एकजनाले उनको २० किलोको कपाल बोकेर हिड्नुपर्छ । उनको कपाल एकपटमा नुहाउनका लागि ६ बोतल स्याम्पु लाग्छ भने कपाल सुक्न तीन दिन लाग्छ ।
जाडो मौसममा उनी चिसो कपालसँगै सुत्ने गर्छिन् । कपाल निकै लामो भएपछि उनले बिगत २५ वर्षदेखि कोर्न छोडेकी छिन् । लामो कपाल भएका कारण केटाहरुले आफुसँग विहे गर्न नमानेको उनले बताएकी छन् । अचानक उनको एउटा हेयर ड्रेसर युवकसँग माया बस्यो र पछि उनीसँगै विहे भयो ।
विहे पश्चात उनको कपाल समालिदिने उनका श्रीमान् भएका छन् । लामो कपालका कारण उनको टाउको र काँधमा असर पर्न सक्ने भन्दै चिकित्सकले उनलाई कपाल काट्न सल्लाह दिंदै आएका छन् । तर उनले कपालको मोडलिङबाट लाखौँ डलर कमाउने भएकीले कपाल काट्न अस्विकार गर्दै आएकी छन् । संसारको सबैभन्दा लामो कपाल उनकै नाममा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता छ ।
Previous माघेसङ्क्रान्ति : चाकु व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ
Next अर्घाखाँचीको ढाकावाङका शिशिर खनाल काठमाडौँबाट चार दिनदेखि बेपत्ता
अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोस् ! मनपरेमा शेयर गरि अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोस् र